Sida loo helo shirkadaha shirkadaha dukaamada SEO ah?
Ka hor inta kale, waxaa muhiim ah in la xusuusto in xataa shirkadaha tayada sare ee shirkadaha SEO ay weligood ku siin doonaan natiijooyin kasta oo weli socda laakiin wakhti dheer. Xaqiiq ahaan, waxay caadi ahaan qaadataa ugu yaraan dhowr bilood si loogu isticmaalo shabakad kasta si ay uga faa'iidaysato calaamadaha hore ee horumarka weyn. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa wax qurux badan oo ku saabsan akhrista shirkadaha shirkadaha SEO - tableau de pointage lectronique. Qarsoodi ah xukunka muddada dheer ee ugu sarreeya ee raadinta ayaa ah in Google lafteeda ay rabto dhammaan hagaajinta in loo keeno nolosha caadiga ah, iyada oo aan loo adeegsan karin habka loo yaqaan "Black Hat Hat" si loo dedejiyo geeddi-socodka horumarinta internetka. Sidaa darteed, dib ugu soo noqosho - sida loo helo adeegyada ugu fiican ee raadinta raadinta - aynu eegno liistada soo socda ee xirfadaha iyo tayada ee ugu fiican calaamadda SEO shirkadaha. Waxaan rajeynayaa in liiskan liisaska gaaban uu kaa caawin doono inaad sameyso isbedel sax ah oo ugu dambayntii qaado go'aanka saxda ah. Kadib, waa inaad taqaanid wax walba oo ku saabsan "bixiyaha adeegga" habboon si aad u ogaato sida dhabta ah ee aad u raadineyso.
Xirfadaha farsamada iyo awoodaha A-1
Ugu horreyntii, bixiyahaaga SEO ugu fiican waa inuu leeyahay xirfad si khafiif ah loo hagaajiyay oo lagu dajinayo dhinac kasta oo dhinaca farsamada SEO ah. Muuqaal ahaan, waxaad raadineysaa shirkadaha ugu fiican ee shirkadaha SEO ee sababo kali ah - sababtoo ah warshadaha nalalka raadinta maahan aagga khibradda xirfadlaha ah ee ugu fiican. Taasi waa sababta shirkada SEO aad mar walba dareentid inaad hubiso waxa loo baahan yahay hadda, haddaad horey u socotay si aad u fulisid, iyo hawlaha ay tahay in lagu geliyo istaraatiijiyada istiraatiijiga ah ee khaaska ah. Sidaa daraadeed, hubso in bixiyahaagu uu diyaar u yahay oo diyaar u yahay in uu siiyo sharaxaad dhamaystiran oo cad oo ku saabsan dadaal kasta oo loo baahdo si aad uhesho boggaaga.
Khibrad waayeel ah oo ku saabsan warshadahaaga
Waxyaalahaasi waa in aaney iibsanayn SEO-ga kasta oo ku haboon fahamka qoto dheer ee ku saabsan sida ugu wanaagsan ee looga shaqeeyo warshadahaaga, ama aqoonta degdegga ah ee inta badan caqabadaha SEO ee aad u badan tahay website-kaaga ayaa la wajihi doona gudaha suuqa qaar ka mid ah. Taasi waa sababta ay u cadeeyn karto in ay tahay shaqo adag oo lagu helo koox fiican oo ka shaqeynaya oo leh khibrad xoogan oo da 'yar. Markaa, markaad qaadanayso go'aanka ugu dambeeya ee shaqaaleynta, waxaan kugula talinayaa inaad codsatid daraasadaha kiisaska la midka ah ama ugu yaraan waxay eegayaan qaar ka mid ah mashaariicda guuleysta ee la xiriira ganacsigaaga ganacsiga.
Macluumaadka suuq-geynta ee macaamilka waa MUST
Waa inaan u qaadanno inaan helno - haysashada karti heer sare ah ee suuq-galinta waa mid muhiim u ah iibiyaha SEO shirkadaha. Dabcan, xaaladaha qaarkood, waxaad marwalba xor u tahay inaad qorto qoraallada qaar ka mid ah xayeysiiska iyo wargelinta. Laakiin waxa ay tahay in bogagga internetka ee ganacsigaagu uu ubaahanyahay oo kaliya macaamiisha macaamiisha macaamiisha ugu fiican, marka laga reebo bilowgii ugu fiicnaanta shaqada. Sidaa darteed, hubso inaad ka fekereyso bixiyeyaasha adeegga oo buuxa ama ugu yaraan shirkadaha baayacmushtarka SEO ee haysta kooxda khabiirada ee suuqa kala iibsadaha.
Ka dib oo dhan, naqshadeynta raadinta guuleysta waa in ay si weyn ugu sharaxdaa nuxurka user-friendly ee kaliya tayada cajiib ah. Xasuuso maxim - Mawduucaagu waa inuu ahaado boqor.